Huawei Mate 30: Ny zava-baovao ateraky ny telefaona | Androidsis
Ny vaovao miavaka indrindra amin'ny Huawei Mate 30
Ny Huawei Mate 30 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity. Vaovao farany ambony an'ny marika sinoa, izay nahatonga antsika hiova maro, ankoatry ny famoahana hevitra maro. Ny tsy fisian'ny Google Apps sy ny fampiasana kinova Android open source Ireo no fanovana nahasarika ny sain'ny haino aman-jery sy ny mpampiasa. Izy ireo dia nanaloka ny ankamaroan'ny fiasa malaza indrindra amin'ity sehatra ity.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao ny vaovao mahaliana kokoa na fiasa vaovao hitantsika ao amin'ireto Huawei Mate 30. vaovao ireto, misy ny sasany amin'izy ireo izay ao amin'ny maodelin'ny Pro ihany, raha sanatria izany dia hasehontsika amin'ny tranga rehetra.
1 Fanaraha-maso ny habetsahan'ny fikasihana
2 Huawei Mate 30 miaraka amin'ny 5G
3 Fanaraha-maso ny fihetsika amin'ny Huawei Mate 30
4 Fampidirana laptop tsara kokoa
5 Mode maizina
Fanaraha-maso ny habetsahan'ny fikasihana
Ny Huawei Mate 30 Pro dia manana efijery miolakolaka izay miavaka amin'ny resaka endrika mihoatra ny maodely hafa. Noho io famolavolana io dia nesorina ny bokotra volume amin'ny fitaovana. Fa kosa, ny marika sinoa dia mampahafantatra ny fifehezana ny fanamafisam-peo, izay mamela antsika mampitombo na mampihena ny habetsaky ny fampiasana ny sisin'ny efijery. Fomba iray hifehezana azy tsy mila bokotra.
Manaova fotsiny a paompy indroa amin'ny rantsan-tànanao amin'ny lafiny roa amin'ny telefaona, dia ho azo atao amin'ny roa tonta, mba hiseho ny mpanara-maso ny feony, ary azontsika atao ny mampitombo ny feon'ny feo amin'ny telefaona ara-dalàna. Fomba tsara hanonerana ny tsy fisian'ireo bokotra ireo.
Huawei Mate 30 miaraka amin'ny 5G
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe, izay saika tsiambaratelo misokatra taorian'ny Fampisehoana Kirin 990 amin'ny voalohan'ny volana, dia ny nahatongavan'izy ireo niaraka tamin'ny 5G tamin'ity tranga ity. Ny marika sinoa dia manohy miloka amin'ny 5G amin'ny findainy avo lenta, zavatra izay hitantsika amin'ireo fitaovana roa ireo. Samy manana ny kinova misy 5G ireo maodely roa ireo, araka ny nanamafisana ny alakamisy teo.
Amin'ny tranga Huawei Mate 30 Pro 5G dia fantatsika izany hanana vidiny 1.199 euro, rehefa alefa eny an-tsena, zavatra izay mbola tsy fantatsika tsara hoe rahoviana izy io. Saingy mampanantena izy io fa iray amin'ireo safidy feno indrindra amin'ity ampahan'ny tsenan'ny telefaona 5G ity. Navoaka ihany koa ny kinova tsy misy 5G.
Lafiny iray manandanja amin'ity tranga ity, dia ny telefaona efa mifanaraka amin'ny 5G SA sy NSA. Ka tsy toy ny maro, azo ampiasaina izy io rehefa naparitaka tanteraka ny tambajotra 5G. Modely maro no tsy manohana afa-tsy ny dingana voalohany an'ny 5G, ka tsy azo ampiasaina ny fananany rehefa miasa ireo tambajotra ireo amin'ny taona 2020.
Fanaraha-maso ny fihetsika amin'ny Huawei Mate 30
Ireo fihetsika dia mipoitra ihany koa ao anatin'ity karazana telefaona marika marika sinoa ity, izay afaka hivoaka betsaka ao aminy Huawei Mate 30 sy amin'ny Mate 30 Pro, misaotra ny sensor telo anoloana io fitaovana io, araka ny hitantsika tamin'ny hetsika fampisehoana. Fakan-tsary fakan-tsary, sensor lalina ho an'ny 3D ary sensor ho an'ny fihetsika no ampiasaina.
Noho io fitambarana io, ny mpampiasa dia ho afaka mifehy an'io avo lenta io amin'ny fihetsika, tsy mila mikasika ny telefaona. Ireo sensor ireo dia mamela ny fanekena ny endrika sy ny endrik'ilay mpampiasa. Izy ireo koa dia ho afaka mifehy sy mandika ny fihetsika ataon'ny mpampiasa eo alohan'ny telefaona. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny mamoha ny telefaona, mandefa sary ao amin'ny galeriana, mifindra amin'ny faritra iray amin'ny menio mankany amin'ny iray hafa na maka pikantsary.
Gestures dia zavatra efa nikasa ny hampihatra amin'ny Android lava. Ny marika tsirairay dia manome azy ny rafitra na fandikany azy manokana, araka ny hitantsika izao ao amin'ity Huawei Mate 30 Pro ity. Ka mampanantena izy io fa ho fitaovana mahaliana amin'ity lafiny ity, miaraka amin'ny fanaraha-maso fanampiny ho an'ireo mpampiasa.
Asa iray ao anatin'io sokajy io ny ny efijery dia hihodina miorina amin'ny toeran'ny masonao sy ny lohanao. Ka raha mipetraka ara-dalàna ianao, mijery ny efijery iray amin'ireto Huawei Mate 30 ireto dia hijoro hatrany. Fa raha apetrakao amin'ny sofa na farafara ny lohanao, ary eo anilanao ianao, dia hihodina izy io, mba hanamboarany ny toeran'ny masonao amin'ny fotoana rehetra. Ary koa, raha ataonao akaiky ny masonao ny telefaona dia hampahafantatra anao izany toe-javatra izany.
Fampidirana laptop tsara kokoa
Ny iray amin'ireo asa miavaka indrindra amin'ity fampisehoana ity dia ny mety mizara rakitra eo anelanelan'ny solosaina finday sy telefaona amin'ny fomba tena tsotra, amin'ny alàlan'ny fihetsika fitarihana tsotra. Hamela anao hampifandray ireo fitaovana roa amin'ny fomba tsotra, na dia tsy mila fifandraisana Internet aza. Amin'izany dia ho mora ny mandefa rakitra eo anelanelan'ny iray sy ny iray hafa.
Eo amin'ny efijery solosaina afaka mahita ny efijery amin'ny Huawei Mate 30 na Mate 30 Pro ianao. Azonao atao ny mandika rakitra eo anelanelan'ny fitaovana roa, mamaly hafatra mandritra ny fotoana iasanao, fa avy amin'ny fitaovana iray, amin'ny fomba ahafahanao miasa am-pahombiazana kokoa. Fiasa izay tsy isalasalana fa tianao be.
Tamin'ny fampisehoana ny EMUI 10 amin'ny fiandohan'ny volana aogositra sahady ity maody maizina ity dia nanao doka tamin'ny interface, izay efa ao amin'ireto Huawei Mate 30. Ireo telefaona vaovao roa misy ny marika sinoa dia manana EMUI 10 ho toy ny sosona manokana. Amin'izany fomba izany, ny iray manontolo dia miova ho loko, ny lokony, izay lasa mainty amin'ity tranga ity.
Ity dia misy fiantraikany amin'ny interface rehetra, ankoatry ny fampiharana. Amin'izany no ahafahany mampiasa aina kokoa sy tsy mahasosotra kokoa ho an'ny maso rehefa mila mampiasa telefaona ianao. Ho fanampin'ny fitsitsiana angovo, satria io faritra io, toy ny mahazatra, dia mampiasa tontonana OLED. Ka ho tsikaritra amin'ny fihinanana angovo.
Toy ny mahazatra amin'ny marika sinoa, ao anatin'ny faritra avo lenta, ny fakan-tsary dia iharan'ny fanatsarana indray. Na dia amin'ity tranga ity aza dia tian'izy ireo ny hifantoka indrindra amin'ny fanatsarana ny fandraisam-peo. Ireo fanatsarana rehetra ireo dia hita taratra tsara ao amin'ny Huawei Mate 30 Pro, izay misy fakantsary efatra, izay hisongadinan'ny fandraisam-peo mihetsika miadana be.
Koa satria amin'ity fitaovana ity dia azo atao ny manoratra hatramin'ny 7.680 fps, toy izay efa naneho hevitra talohan'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy. Ka mihoatra izany fomba izany ny mpifaninana rehetra eny an-tsena. Amin'izany no ahafahanao mahazo horonan-tsary amin'ny antsipirihany amin'ny fotoana rehetra, mety tsara amin'ny traikefa tsara, ary azo ampitahaina amin'ireo nomen'ny fitaovana matihanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny vaovao miavaka indrindra amin'ny Huawei Mate 30
Ny Google Pixel 4 an'ny 64 GB dia vidiny 820 euro
Kairosoft dia miverina amin'ny ady miaraka amin'ny Kingdom Adventures hananganana ny fanjakanao